आत्मरक्षाका लागि प्रतिकार गर्दा कतारको जेलमा, सहयोगी मनहरुको ८२ लाखपछि नेपालमा ! - Everest Dainik - News from Nepal
आत्मरक्षाका लागि प्रतिकार गर्दा कतारको जेलमा, सहयोगी मनहरुको ८२ लाखपछि नेपालमा !
काठमाडौंः कतारको जेलमा थुनिएका बिनोद रानाभाट सोमबार स्वदेश फर्किएका छन् । बैदेशिक रोजगारीका लागि जनरल क्लिनरको कामका लागि ३ बर्षअघि कतार पुगेका चितवनको माडी नगरपालिका वडा नं. ७ कीर्तनपुर (हाल भरतपुर १५) का रानाभाट कतारस्थित ओक्रा जेलमा थुनिएका थिए ।
रानाभाटलाई भारतीय कामदारले आक्रमण गरेकोमा आफ्नो ज्यानको सुरक्षाका लागि प्रतिकार गर्दा भारतकै अर्का कामदारको मृत्यु हुन पुगेको थियो । कतारस्थित अल ग्रुप क्लीनिङ कम्पनीमा जनरल क्लिन वर्कर पदमा काम गरिरहेका उनलाई घटना लगत्तै कतार पुलिसले पक्राउ गरी ओक्राजेलमा राखी मुद्दा चलाएको थियो ।
मुद्दाको फैसला अनुसार रानाभाटले ५ महिना भित्र भारतीय कामदारको परिवारलाई ब्लड मनिका रुपमा २ लाख ६० हजार कतारी रियल अर्थात नेपाली करिब ८२ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने थियो । उनको रिहाइका लागि रानाभाट रिहाइ तथा उद्धार समिति गठन गरी सबैसंग सहयोग उठाएर ८२ लाख रुपैयाँ नेपालबाट पठाई रिहाई गरिएको हो ।
ट्याग्स: बिनोद रानाभाट